Aimbova Mutungamiriri weIsrael Netanyahu ane zvakavanzika zvakavanzika muHawaii
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhandare yendege » Aimbova Mutungamiriri weIsrael Netanyahu ane zvakavanzika zvakavanzika muHawaii
nhandare yendege • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Hawaii Kupwanya Nhau • Israel Breaking News • Nhau Dzakanaka • nhau • vanhu • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Lanai, inozivikanwawo sePineapple Island yeHawaii, inzvimbo inzvimbo mabhirionea uye vanozivikanwa vanoenda kuti vafarire kuvanzika uye kugarika. Urongwa urwu hunosanganisira Microsoft co-founders, Elton John, mapurezidhendi, nevamwe vakawanda. Zvino, aimbova Mutungamiriri kubva kuIsrael akaonekwa paLanai, asi panogona kunge paine zvimwe kunyaya - rangano?
Israel iri kuudza vagari kuti varege kuenda kunze kwenyika, asi vaimbova Mutungamiriri weIsrael uye mutungamiri anopikisa, Benjamin Netanyahu, parizvino vari pazororo kuChitsuwa cheLanai muHawaii.
Chitsuwa cheLanai ndechake Larry Elisson, wechiJudhaish American bhirionea uye muridzi weInternet Tech kambani pangataura.
Larry Elisson zvakare muchuchisi-chapupu mukutongwa kuri kuuya kwehuori kwaBenjamin Netanyahu muIsrael.
“Ndiri paFMwaka wedu Lanai, uye vaimbova Mutungamiriri Benjamin Netanyahu iri kugara pano, pamwe neboka revachengeti veMossad, ”ndiwo meseji yakatumirwa nemuenzi wehotera nhasi.
Kana aimbove PM ari kufamba, munhu anogona kufunga kuti panogara paine zvakavanzika ajenda? Naiye aimbove Mutungamiriri weIsrael aonekwa pachitsuwa cheLanai, chirongwa ichi chiri kutsvaga muraraungu weHawaii, kana kuti pamwe kusangana nechapupu chemuchuchisi chinofanirwa kupupurira muchuchisi mukutongwa kuri kuuya kuzopikisa PM.
Pazuva rimwe chete, kumwe kufa uye mazana manomwe nenomwe makumi manomwe nematatu ezvirwere zveCOVID-763 zvakanyorwa muU.S. State yeHawaii. Kuverenga nechitsuwa kunosanganisira 19 mitsva mitsva paOahu, 469 paMaui, 123 paHawaii Island, 126 paKauai, 26 paMolokai, 5 pa Lanai, uye vagari gumi nevaviri veHawaii vakaonekwa kunze kwenyika.
Musi waAugust 16, iyezvino anopikisa mutungamiri muIsrael akaonekwa akagara panhandare yendege kuSan Francisco airport akamirira mabhegi ake egorofu. Sezviri pachena, aive munzira yake refu kubva kuTel Aviv kuenda kuchitsuwa cheLanai muHawaii, sezvakataurwa neThe Times yeIsrael.
Kugara pamwaka mana eLanai hakusi kudhura.
Iyo penthouse suite pa Four Seasons Hotel Lanai inodhura US $ 21,000 husiku humwe, ichiita iro rinodhura kwazvo muHawaii. Chitsuwa ichi zvakare musha kune maviri gorofu makosi, kusanganisira Manele Golf Course. Muna 2, mubatsiri weMicrosoft Bill Gates akaroora paburi regumi nenomwe redzidzo.
Iye aimbova PM anomiririra iye nemhuri yake vari kubhadhara rwendo kuenda kuLanai muHawaii, chitsuwa chinozivikanwa kuve chinzvimbo chevazhinji mamirionea uye mabhirionari nekufamba kwenguva.
Sekureva kweThe Times of Israel, gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu riri kuenda kuzororo kuUS kunyangwe hurumende yakakwikwidza kushanya kune dzimwe nyika.
Kunyangwe parizvino rekodhi kuputika kweiyo Delta musiyano we COVID-19, Hawaii inogamuchira 20-30,000 vashanyi vatsva zuva rega rega. Vashanyi vakadaro vari kusvika kubva kunzvimbo dzekuUS uye vanofanirwa kuratidza chitupa cheCDC-chakapihwa hutachiona kana kuburitsa chitupa chePCR chekuyedza cheUS.
Naizvozvo, vashanyi kazhinji vashanyi vekumba kana vagari vanodzoka.
Hazvisi pachena kuti aimbove PM angadai akazviita sei kana achibhururuka kuenda kuHawaii asina kumbomira muSan Francisco, sezvakataurwa munhau dzeIsrael.
Chitsuwa cheLanai chikamu cheMaui County uye zvinopfuura 98% ndezvayo muridzi weOracle Larry Ellison.
Vashanyi vashoma vanogara pazvitsuwa vanoshanyira kuHawaii, Lanai inopa zvinokwezva zvikuru kune vashanyi vayo.
Kune aimbova Mutungamiriri, zvinogona kuita zvakawanda - musangano nemuridzi wechiwi uye shamwari Larry Ellison. Ellison zvakare chapupu mune yakakosha iri kuuya nyaya yehuori pamusoro peaimbova PM.
Makiromita mapfumbamwe kubva kuMaui, zvakadaro nyika iri kure, Lanai anogona kunzwa senzvimbo mbiri. Yekutanga inowanikwa munzvimbo dzekutandarira dzakashongedzerwa apo vashanyi vanogona kuzviitira zvemhando yepamusoro-soro uye mukwikwidzi-chikamu chegorofu. Mumwe wacho anowanikwa achirova mumigwagwa yechitsuwa yakakwasharara mumotokari inofamba nemavhiri mana kuti aongorore hupfumi hwekunze. Kugadzikana, kushanya, uye kuvanzika kunogona kuwanikwa mune chero ipi ye9 matunhu eLanai.
Apo COVID-19 yakarova, Ellison akabvisa rendi yebhizinesi kuLanai, uye muna 2018, akatanga kambani yehutano Sensei, iyo inotarisira maspas uye magirinhi anoshandiswa nemagetsi ezuva.
Ellison akatenga dzinoda kusvika makumi mapfumbamwe neshanu muzana yechitsuwa ichi mugore ra98 nemari inosvika US $ 2012 miriyoni; kutenga kwake kwaisanganisira 300 (87,000 hectares) yechitsuwa che 35,200 acres (90,000 hectares) epasi.
Lanai, iri musha wevanhu vangangoita zviuru zvitatu nemazana maviri, ndicho chitsuwa chidiki pane vanhu muHawaii uye inogara kumahombekombe akanyorovera, nzvimbo dzakaomarara, nzvimbo dzekutandarira dzakakwirira uye zvishuwo zvekusimudzira zveEllison, zvaari kuita kuburikidza nekambani yekusimudzira inonzi Pulama Lanai.
Chitsuwa che141-square-mile (365 sq km), iri mamaira masere (8km) kubva kumahombekombe eMaui, ine zero zero marobhoti uye nemigwagwa mishoma yakavezwa, sekureva Forbes. Kuenzaniswa nezvimwe zviwi zveHawaii, Lanai yakavharirwa - asi Ellison ane hurongwa hwekuchinja izvo. Anoda kushandura Lanai munzvimbo yekushanya.
Parizvino, chitsuwa ichi musha kune 2 Mahara Mahara Mahotera uye akati wandei madiki eB & B mhando yekugara sarudzo.
MuIsrael, Netanyahu ari kutongwa nemhosva dzekubiridzira uye kutyora kuvimba mumatare matatu akapatsanuka, pamwe nekufumbatira mune chimwe chazvo. Iye anoramba chakaipa.
Ellison ndomumwe wevane mazana mazana ekupomera zvapupu mukutongwa kwehuori kwaNetanyahu.
Zita rake zvinonzi rakauya mune mbiri dzenyaya uye chirevo gore rapfuura chakati chakakoka nekugonesa nyanzvi yekuIsrael Arnon Milchan kusiya gweta rake kuti Netanyahu amugamuchire.
Nancy Borts anoti:
Nyamavhuvhu 21, 2021 pa14: 45
Innuendos, zvisirizvo, zvirevo zvisina chokwadi. Hapana panoti chinyorwa chinoti Ellison (kwete Elisson)
aive pachitsuwa, akasangana naNetanyahu kana akatoronga kugara nevashandi vaEllison.
Kusarura kwemunyori kunoonekwa pachena. Haisi yechokwadi kana inokudzwa kumhan'arira!